Tsy iza fa kandidà iray hafa izay tokony hifanandrina amin’ilay voalohany ihany. Efa nosokafana ny fanadihadiana azy ary raha ny fantatra izany dia antony ara-politika ity kidnapping nitranga ity. Na izany aza anefa dia nangataka 40 tapitrisa ariary ho takalon’aina ireo jiolahy. Vola izay saika hanaovana propagandy izany raha izany.
ASAN-JIOLAHY TENY ATSIMONDRANO
Nafana ny asan-jiolahy tao Atsimondrano omaly. Tao ny tranon’olona voatafika ary tao koa ny épicerie izay nasesin’ireo olon-dratsy. Efa-dahy hatrany izy ireo ka manao saron-tava ny roa. Basy sy zava-maranitra no entin’ireo manafika. Tao Bongatsara sy Ambatomalaza ny toerana nanaovan’ireo fandrobàna. Samy nahazoany vola sy entana ary firavaka volamena avokoa. Mihorohoro ny mponina ankehitriny manoloana ireo fanafihana misesy ireo.
MPANDRAHARAHA MPANAFATRA ENTANA
Marobe ny mpandraharaha izay miompana betsaka amin’ny fanafarana entana no hivelomany no mitaraina ankehitriny. Nanohana mafy an-dRajoelina izy ireo ary nanantena fa mba tsy ho voakitika ny tombotsoany dia ny tsy higafiana ny fivoahan’ny entana ao amin’ny ladoany izany. Kinanjo tsy izany no mitranga ankehitriny fa milahatra ny kaontenera izay tsy tafavoaka ao Toamasina hatramin’ny niandohan’ity fitondràna ity. Mahatsiaro tena ho voafitaka izy ireo ary efa mivorivory etsy sy eroa.
Tafapetraka ny fitorian’ny fanjakana avy amin’ny alàlan’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina ny haino aman-jery IBC. Ankoatr’izay dia nohenoin’ny tompon’andraikitra ambony sy ny holafitry ny mpanao gazety. Mbola tsy fantatra izay mety ho sazy ara-pitantanana (sanction administrative) hivoaka taorian’izay.
MPIASAN’NY PREZIDANSA TAPAKA LALAN-DRA
Mpiasa ambony eo anivon’ny prezidansa no tapaka lalan-drà tampoka any amin’ny lohany ary tsaboina ao Maorisy. Nisy fahatairana tampoka narahin’ny fientanam-po no nahavoa azy raha araka ny loharanom-baovao eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika. Vao avy notendrena tale vao haingana anefa izy io ary fantatra koa fa havana akaikin’ny vadin’ny Filoha ihany. Nitsidika azy rahateo io farany tao Maorisy farany teo.